नयाँ वर्षमा टेलिकमको अफर : २९९ मा १४ जीबी डाटा – BUSINESSPANA.COM
नयाँ वर्षमा टेलिकमको अफर : २९९ मा १४ जीबी डाटा
नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको अवसरमा विभिन्न सुविधा सहितको स्प्रिङ अफर योजना ल्याएको छ । कम्पनीले चैत ३१ गतेदेखि ९० दिनसम्मका लागि इन्टरनेट डाटा र भ्वाइस कलमा केही थप सुविधासहित स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराइएको हो ।
स्प्रिङ अफर अन्तर्गत कम्पनीका मोबाइल ग्राहकका लागि प्रतिदिन ५०० एमबी डाटा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी १४ जिबी डाटाको अफर जम्मा रु. २९९ मा उपलब्ध गराइएको छ ।
ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी जम्मा रु. १२५ मा सबै नेटवर्कमा १ जिबी र फोरजी नेटवर्कमा थप ३ जिबी गरी जम्मा ४ जिबी डाटा अफर ल्याइएको छ । ५ दिन प्रयोग गर्न सकिने यस अफरमा १०० मिनेट कुराकानी समेत गर्न सकिन्छ । यो अफर पनि २४सै घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previous: अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दुमा सेयर बजार
Next: रुरु जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओ बाँडफाँड यसै साता, ६१.६५ गुणा बढी आबेदन